Iskudhicii Alexandrite - HDSM - Bagdasarov - kobcinta kobcinta - video
Alexandrite silsiladeedka "Qaabka toosan ee qaab dhismeedka adkaynta" ee uu abuuray Kh.S.Bagdasarov sanadkii 1964 wuxuu ahaa fikrad cusub oo xagjir ah oo ku saabsan koritaanka kristal hal kali ah oo ku saleysan ku dhaqaaqista iskutallaabta leh sheyga ceyriinka ah iyo iniin kris kali ah oo jihada safka hore ah. Qaabkan waxaa loo sameeyay koritaanka cabirka weyn, Nd doped, kirisaska laser-ka altuminium-aluminium oo heer sare ah. Waxay u rogtay inay wax ku ool u tahay koritaanka dhagaxa sidoo kale abuurista kiristaalo leh aagagga dusha aan hore loo arag. Isticmaalka arrimaha habka 'HDS' ee isku-darka ee isku-darka waaweyn iyo gaar ahaan waaweyn ee qaabka-muraayadaha leucosapphire ah oo keli ah ayaa la xaliyay.
Hannaanka kobcinta hababyada HDS waxay ka kooban yihiin hababka soo socda
Dhismaha Bagdasarov wuxuu leeyahay tayo sare oo aad u sarreeya waxaana uu ku habboon yahay codsiyada farsamada, farsamada, RF iyo codsiyada.
Alexandrite silsiladaha - Bagdasarov